भर्डिलाइट रत्न एक हरियो टुरमालाईन - भिडियो हो
ट्याग ग्रीन, टूमलाइन, सज्जनता
भर्डिलाइट रत्न एक हरियो टुरमालाईन हो। हामी अर्लिंग, औठी, हार, कंगन वा पेंडन्टको रूपमा सेट स verd्गीत रत्नको साथ अनुकूल गहनाहरू बनाउँछौं। Verdelite अर्थ।
हाम्रो पसलमा प्राकृतिक पाउडर किन्नुहोस्
यो विशेष गरी हरित टुरम्यालिनको एक प्रकार हो, कहिलेकाँही अन्यथा ट्रेडमा हरी टूमलाइनको रूपमा लिइन्छ। रंगको साथ चम्किलो बिजुली देखि सूक्ष्म हल्का हरियो बनाउने र रंग ढु stone्गा परिवारमा यसलाई अत्यधिक खोजी गरिएको पत्थर।
एक क्रिस्टल बोरान सिलिकेट खनिज एल्युमिनियम, फलाम, म्याग्नेशियम, सोडियम, लिथियम, वा पोटेशियम जस्ता तत्वहरूको साथ मिश्रित। यो अर्ध-मूल्यवान ढु stone्गाको रूपमा वर्गीकृत गरिएको छ।
हरियो टुरमालाईन छ सदस्यीय रिंग साइक्लोसिलिकेट हो जुन त्रिकोणात्मक क्रिस्टल प्रणाली रहेको छ। यो लामो, पातलोदेखि मोटो प्रिस्मिटिक र स्तम्भ स्तम्भहरूमा देखा पर्दछ जुन प्राय: क्रस-सेक्सनमा त्रिकोणीय हुन्छ, अक्सर घुमाउरो स्ट्रिटेड अनुहारहरू सहित। क्रिस्टलको अन्त्यमा टर्मिनेसनको शैली कहिलेकाँही असममित हुन्छ, यसलाई हेमिमोर्फिजम भनिन्छ। सानो स्लिन्डर प्रिज्म्याटिक क्रिस्टलहरू प्राय: रेडियल डेजी-जस्तो बान्कीहरू बनाउने, अप्लाईट भनिने राम्रो-ग्रेन्ड ग्रेनाइटमा सामान्य हुन्छ। भर्डिलाइट टुरमेललाइन यसको तीन-पक्षीय प्रिज्महरूद्वारा छुट्याइएको छ। कुनै अन्य साधारण खनिजको तीन पक्ष हुँदैन। प्रिम्स अनुहारहरूमा प्राय: भारी ठाडो स्ट्राइकहरू हुन्छन् जुन एक गोल त्रिकोणीय प्रभाव उत्पन्न गर्दछ। हरी टुरमेललाइन विरलै पूर्णतया यूरेड्रल हुन्छ।
यो कार्यान्वयन बल, निरन्तर शक्ति, आदर्श शक्ति महसुस गर्न को लागी आवश्यक मानसिक शक्ति दिन एक रत्न हो। यसले सम्पत्ति, प्रेम र स्वास्थ्यलाई आकर्शित गर्दछ जुन मालिकले चाहानुहुन्छ। यस ढु stone्गाले राम्रो भाग्यको मार्गलाई दृढतापूर्वक अग्रसर गर्न मद्दत गर्दछ। माइनसलाई प्लसमा रूपान्तरण गर्न यो एउटा रत्न हो। यसले भाग्यको शृंखला उत्पन्न गर्दछ। रत्नले तपाईंलाई नयाँ चीजहरूको लागि चुनौती पनि दिन्छ। तपाईं सीमा बाधा पार गर्न को लागी एक मौका प्राप्त गर्नुहुनेछ। यसले तपाइँलाई हालको स्थितिसँग सन्तुष्ट हुनबाट रोक्छ। यो रत्न हो भविष्यको सम्भावनालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने।
हाम्रो मणि पसलमा प्राकृतिक पाउडर किन्नुहोस्
हामी अर्लिंग, औठी, हार, कंगन वा पेंडन्टको रूपमा सेट स verd्गीत रत्नको साथ अनुकूल गहनाहरू बनाउँछौं।
सौंदालाई केको लागि प्रयोग गरिन्छ?
ग्रीन टुरमेललाइन उपचार प्रयोजनका लागि आदर्श हो, किनकि यसले यसको उपचार शक्तिहरूलाई केन्द्रित गर्न सक्दछ, आभा खाली गर्दै, र अवरोधहरू हटाउँछ। हरित टुरमेललाइन अक्सर हृदय चक्र खोल्न र सक्रिय गर्नको लागि प्रयोग गरिएको छ, साथै हृदय र स्नायु प्रणालीमा शान्तिको भावना प्रदान गर्दछ।
साउडेलाईट किन्न कहाँ?
हामी बिक्री हाम्रो पसलमा
के पाउदो दुर्लभ छ?
प्रमुख हरी टूमलाइन निक्षेपहरू ब्राजिल, नामिबिया, नाइजेरिया, मोजाम्बिक, पाकिस्तान र अफगानिस्तानमा छन्। तर राम्रो र and्ग र पारदर्शीताको हरियो टोरमालाईन कुनै पनि रत्न खानीमा दुर्लभ चीज हुन्छ। र यदि थप रूपमा, तिनीहरू पनि समावेशीकरणबाट स्वतन्त्र छन् भने, तिनीहरू वास्तवमै धेरै उच्च लालच भएका छन्।
के पाउदो मूल्यवान छ?
हरियो टुरमेललाइन सब भन्दा महँगो हुन्छ जब यसको केही नीलो हुन्छ वा क्रोम टूमलाइन जस्तै पन्ना जस्तो देखिन्छ।
ट्याग Schorl, टूमलाइन
ट्याग इङ्कुकोट, टूमलाइन
बिरालाको आँखा टूमलाइन
ट्याग बिरालो आँखा, टूमलाइन